China Heavily Invest Rare-earth in Burma underadisguised form |
China Heavily Invest Rare-earth in Burma underadisguised form
Posted on June 7, 2021 by matupi
တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ဩစတြေးလျ အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝန်းသိုနယ်မှာ ရွှေနဲ့ ကြေးနီသတ္တု တူးဖော်ရေးအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံ ပမာဏ အရွယ်အစားရှိတဲ့ လုပ်ကွက်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ သတ္တုတူးဖော်ရေး တရုတ်ကုမ္ပဏီ တွေ နဂိုကတည်းက များစွာရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Panaust လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ Myanmar’s Ministry for Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) in Naypyitaw ကနေ အဲဒီလိုင်စင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ရရှိခဲ့ပါတယ်။ (ဒီနေ့က ဇွန်လ ၄ ရက် ကြာသပတေးနေ့ ဆိုတော့ သူပြောတာ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် မနေ့ကလား မသိဘူး) အဲဒီ မြေကွက်ဟာ ဧကပေါင်း တစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျော် ဖြစ်ပါတယ်။
Panaust ကုမ္ပဏီဟာ ကွမ်တုံအခြေစိုက် တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ သူအဓိက လုပ်တာက သတ္တုတူး ဖော်မှု၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ အိမ်မြေနဲ့ငွေကြေး၊ စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု။
ဒီခေတ်မှာ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ ကြေးနီနဲ့ရွှေကို အဖက်လုပ်ပြီး မတူးတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သတ္တု တူးဖော်ရတဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်နဲ့ စာရင် ရွှေနဲ့ ကြေးနီ ပြန်ရတာက ဘာမှမဟုတ်လို့ပါ။ သူတို့အမှန်တကယ် တူးမှာကတော့ မြေရှားသတ္တု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကချင်မှာ အဓိက လုပ်နေတာက ရှီထူ လို့ခေါ်တဲ့ မြေရှားသတ္တု တူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကျတော့ နာမည်က သံတို့ နီကယ်တို့ ကြေးနီ တို့ ၊ အဲဒီလို ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ယူပြီး တကယ်တူးတော့ မြေရှား ကိုသာတူးတာပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကို ခြယ်လှယ်တဲ့ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်ဟာ ရေနံ၊ လျှပ်စစ် စတာတွေထက် မြေရှား လို့ခေါ်တဲ့ သတ္တု သာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ၊ မြေရှား ဆိုတာဘာပါလဲ။
အင်္ဂလိပ်လို REE လို့အတိုကောက်ခေါ်ပါတယ်။ Rare earth element ပါ။ ဘယ်မှာသုံးလဲ။ နေရာတိုင်းမှာ သုံးပါတယ်။ အခု ကျမတို့ ကိုင်နေတဲ့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကစလို့ မကပ်တဲ့ ဒယ်အိုးကအစ၊ နှလုံးအတု ကအစ၊ နေရာတိုင်းမှာ REE ကိုသုံးပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ ။ ဒါဆို ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ REE ကို ဘာဖြစ်လို့ မထုတ်ရမှာလဲ။
ဒါသိပ်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်က ထွက်သမျှ REE ကို တရုတ်ပြည်ကိုသယ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခွဲထုတ်ပေးတဲ့ စက်မရှိ လို့ပါ။ အဲဒီလို အဆင့်ဆင့်သန့်စင်ခွဲထုတ်ပေးဖို့ စက်က တရုတ်မှာပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နယ်စပ်လမ်းကြောင်း ကနေ တရုတ်ပြည်ဘက်ကို အကုန် သယ်ပါတယ်။ ဈေးကောင်းရလား ဆိုတော့ မရနိုင်ဘူး။ မထုတ်သင့်တာ ဈေးနှိမ်ခံရလို့လား။ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီ REE ကို ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ (ရွှေဖြစ်ဖြစ်၊ ကြေးနီဖြစ်ဖြစ် ဘာထုတ်ထုတ်) မြေထု လေထု ရေထု သုံးခုစလုံးဟာ အဆိပ်သင့်သွားတယ်။ နောင် နှစ် ၃၀ ဆို မျိုးကန်းသွားမှာပါ။ မြေသားထဲ ဝင်သွားတဲ့ အဆိပ်ဟာ ပျက်ပြယ်မသွားဘူး။ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ရေထဲရောက်လာပြီး အကုန်မျိုးကန်းကုန်မှာ။
အမေရိကန်လို နိုင်ငံတောင် မြေရှားသတ္တုထုတ်တာ တစ်နေရာပဲရှိပါတယ်။ တမင်ကို မထုတ်ဘဲ တရုတ်ကနေပဲ ဝယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်ကြီးက ကုန်သွယ်စစ်ပွဲမှာ မြေရှားကို ကိုင်လိုက်တော့ ခုဆို အမေရိကန်တွေလည်း မြေရှားကို စွန့်ပစ်မိုင်းတွင်းတွေကနေ ပြန်ထုတ်ဖို့ လုပ်နေကြပါပြီ။
မြေရှား ဆိုတာ သိပ်ကို ရှားပါးနေတဲ့သတ္တုမို့လို့ မြန်မာပြည်က ထူးထူးခြားခြား သယံဇာတတွေ ပေါကြွယ်ဝနေ တာလား။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ မြေရှားသတ္တုကို နေရာအစုံမှာ ထုတ်လို့ရပါတယ်။ ပေါသမှ သိပ်ပေါ။ ကုန်ကုန်ပြောရင် အိန္ဒိယလို တိုင်းပြည်မှာတောင် မြေရှားကောင်းကောင်း ထွက်တဲ့ နယ်မြေ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း သိန်းချီရှိပါတယ်။ အဲဒီလို တိုင်းပြည်တွေကတောင် မြေရှားကို ထုတ်ခွင့်မပေးပါဘူး။
အင်မတန် ပေါတဲ့ ဓာတ်သတ္တုပါ။ ဘာဖြစ်လို့ အခရာ ကျသလဲဆိုတော့ ထုတ်ဖော်တဲ့အခါ အက်စစ်အပြင်းစားသုံးရတယ်။ အဲဒါ ထုတ်ပြီးသွားတဲ့ မြေကို ဘာဆို ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ လုံးဝဥဿုံ ပျက်စီးသွားတယ် ဆိုတာထက် တောင် ပိုသေးတယ်။ အဆိပ်သင့်သွားလို့ပါ။ မြေရှားစိမ်ကန်ကြီးတွေပေါ် ငှက်ဖြတ်ပျံရင်တောင် ပျံရင်း ကျသေပါ တယ်။ အဲဒီ ဓာတ်တွေဟာ မြေပေါ်ရောက်လာတာနဲ့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွတာမို့ ကင်ဆာ အဖြစ်အများဆုံးပါ။ အဲဒါ မြေကြီးထဲက ထွက်လာတဲ့ သတ္တုကပေးတာ။ သုံးစွဲရတဲ့ အက်ဆစ်က ပေးတာ မပါသေးဘူး။
မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီက တူးတဲ့ လက်ပံတောင်း ကြေးနီသတ္တုတွင်းကြောင့် အဲဒီဒေသမှာ ပြဿနာပေါင်းစုံ တက်ခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု၊ ရေအရင်းအမြစ်ပျက်စီးမှု စတာတွေကို အကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရ၊ ခံနေဆဲ၊ နောင်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံရဉီးမယ်။ လက်ပံတောင်း၊ စပါယ်တောင်၊ ကြေးစင်တောင် စတဲ့ ကြေးနီ စီမံကိန်း နယ်မြေတွေတောင် ဧကပေါင်း သောင်းဂဏန်းပဲ ရှိပါတယ်။ ခုက လုပ်ထည့်လိုက်တာ ဧက တစ်သိန်းကျော်။
ဝါးစိမ်းတောင် ကိုလည်း တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေက တူးချင်လှချည်ရဲ့ဆိုလို့ ဝါးစိမ်းတောင် ဒေသခံတွေ အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်လို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင် ကျမသွားခဲ့ဘူး။ ဝါးစိမ်းတောင်အတွက် တောင်းတဲ့ မြေကလည်း ဧကပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ပဲ။ ဝါးစိမ်းတောင် ပါတော့မလား ဆိုပြီး တထင့်ထင့်နဲ့ နေခဲ့ရတာ အခု မထင်ဘဲ ဝန်းသို ပါသွားတယ်။ လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ။ ဧကပေါင်း တစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျော်တဲ့။
အဲဒီ နယ်ခံတွေ အဲဒီနယ်မြေကို အသက်နဲ့လဲ ကာကွယ်ကြနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းက ရွှေစတဲ့ ရှားပါးသတ္တုတွေ တအားထွက်တာက သက်ရင့်မြေသားမို့ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော အဲဒီ အထက်က မြေသားထဲ စိမ့်ဝင်သွားတဲ့ အက်စစ်ဟာ နောင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်ကြာရင် အောက်ဘက် ကို ရောက်လာမှာပါ။
ချင်းတွင်း ဧရာဝတီ စတဲ့ မြစ်ကြောင်းအဆင့်ဆင့်ကနေ ရောက်လာမှာပါ။ အခုပြောတာကို ရီစရာကြီးလို့ မထင်ပါနဲ့။ အဲဒီ REE နဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်နဲ့ချီ လေ့လာထားပါတယ်။
ပို့စ်တစ်ပုဒ်ထဲမှာ လိုရင်းရောက်အောင် ရေးရတာမို့ မပြည့်စုံတာကို သီးခံပေးပါ။
ဘယ်ကုမ္ပဏီကိုမှ ခေါင်းစဉ် တခြား လုပ်မှာက တခြားလို့ မစွပ်စွဲပါဘူး။ သဘောတရားအရပဲ ပြောတာပါ။ ဘယ်ကုမ္ပဏီ ကိုမှလည်း မသိပါဘူး။ တက်လာတဲ့ သတင်းအရပဲ ပြောတာပါ။ ဘာပဲ ပြောပြော အခုလို ကိုဗစ်ကပ်ဆိုက်တုန်း ဒီလောက်ကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အရယူသွားနိုင်တာ အင်မတန်တော်ပါတယ်။ လက်ပံတောင်းတောင် ဧက နည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။ အခုက အဲဒါရဲ့ ဆယ်ဆ။
ရှိသမျှ လွယ်လွယ် ရောင်းစားတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် တော့ ဘာဂုဏ်မှကို မယူနိုင်တာပါ။ ရှက်လည်း ရှက်တယ်။
The boom in Mining Rare Earths Poses Mounting Toxic Risks
The mining of rare-earth metals, used in everything from smartphones to wind turbines, has long been dominated by China. But as mining of these key elements spreads to countries like Malaysia and Brazil, scientists warn of the dangers of the toxic and radioactive waste generated by the mines and processing plants.
As global demand has surged in recent years for rare earth elements, fears have grown that China, which accounts for more than 95 percent of rare earths output, will withhold supplies, as it did temporarily two years ago duringadispute with Japan. Asaresult, across five continents and numerous countries — including the United States, Brazil, Mongolia, and India — rare earth processing projects are being launched or revived. With them come the potential threats to the environment and human health that have plagued China’s processing sites.
Bayan-Obo, China’s largest rare earths project has been operating for more than four decades. According to the Germany-based Institute for Applied Ecology, the site now has an 11-square-kilometer waste pond — about three times the size of New York City’s Central Park — with toxic sludge that contains elevated concentrations of thorium.
“We are worried,” he says. “We don’t want our environment to be destroyed as it was in China.
Article of Mike Ives in English version (January 28, 2013)
Burmese version credit o WPM (initial name for confidential
« Political Analysis on the fate of Burma links via Taiwan (China) and Crimea (Russia) versus US-led allies withastrong partner Japan: Open Advice to NUG & CRPH »